२०७५ मिश्रित वर्ष : पानी कम पर्ने - Tesro Ankha
काठमाडौँ । विक्रम संवत् दुई हजार पचहत्तर २०७५ वैशाख १ गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपालभरि आपसमा शुभकामना आदान–प्रदान गरी मनाइँदै छ ।
आज हरेक व्यक्तिले गत वर्ष गरेका कामको सफलता/असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता पाउन नयाँ योजनाको सङ्कल्प गर्छन् ।
यस अवसरमा आज बिहानै स्नान गर्ने, घर–आँगन सफा गर्ने, देवदेवीको दर्शन गर्न मन्दिर जाने, मीठोमीठो खाने, साथीसङ्गाती तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी आपसमा शुभकामना साटासाट गर्ने गरिन्छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ सदस्य एवम् इतिहासकार प्रा. डा. दिनेशराज पन्त मल्लकालदेखि नेपालमा मौलिक संवतका रूपमा विसं चलेको बताउँछन् । “नेपालमा मात्र मौलिक रूपमा यो संवत् चल्छ, भारतमा सरकारी संवत् शक संवत् भए पनि व्यवहारमा इस्वी संवत् चलेको छ,” पन्तले भने ।
नेपालमा विसं १३५ देखि शक संवत्, विसं ६३३ देखि मानदेव संवत्, विसं ९३६ देखि नेपाल संवत् चलेको उनले जानकारी दिए । यी संवत्मध्ये अहिले मानदेव संवत्को चलन हराइसकेको छ ।
विक्रमको १२औँ शताब्दीमा गुजरातबाट आएका विद्वान्ले किताब सार्दा पहिलोपटक विसंको प्रयोग गरेको लिखित दस्तावेज फेलापरेको इतिहासकार पन्तले सुनाए । विक्रम संवतत्लाई पहिले ‘कृत’, ‘मालव’, ‘मालव गर’ आदि नामले पनि चिनिन्थ्यो ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतम विसं शास्त्रीय संवत् भएको बताउँछन् । “सौरमान र चान्द्रमान दुवैलाई समन्वय गरेर बनाइएको संवत् नै विसं हो, विक्रमको अर्थ पराक्रम र आदित्यको अर्थ सूर्य हुन्छ, सूर्यका उपासकले चलाएकाले नै यसलाई विक्रम संवत् भनिएको हो,” उनले भने ।
राजा विक्रमादित्यले चलाएको संवत् भएकाले यो संवत्लाई विक्रम संवत् भनिएको तर्क पनि एकथरीले गर्ने गरेका छन् । यस अवसरमा शनिवार नेपालभरिका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान एवम् शिक्षण संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।
यस वर्षको संवत्सरको नाम ‘विरोधकृत’ हो । संवत्सरको फलअनुसार यो वर्ष मध्यम रहेको समितिले जनाएको छ । यस वर्ष वर्षासमेत कम हुने समितिले स्वीकृत गरेका पञ्चाङ्ग पात्रोमा उल्लेख छ ।
२०७४ सालको अन्तिम दिन शुक्रवार अस्ताउँदै गरेको सूर्य ।
यस वर्ष जेठमा मलमास परेको छ । मलमासमा नित्य रूपमा गरिने पूजापाठ गर्नुहुन्छ । नैमित्तिक अर्थात् अकस्मात् परी आउने बालक जन्मँदा नामकरण, मानिस मर्दा क्रिया कर्म आदि गर्न शास्त्रीय रूपमा अवरोध नहुने अध्यक्ष गौतमले सुनाए । कुनै कामनाले गरिने काम्य कर्म भने मलमासमा गर्नुहुँदैन ।
विश्व ब्रह्माण्ड सञ्चालन गर्ने ग्रह परिषद्अनुसार यस वर्ष राजा सूर्य, प्रधानमन्त्री शनि र सेनापति मंगल रहेका छन् । राजा र प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका ग्रहबीच वैमनस्यता रहेकाले यसको प्रभाव राज्यमा पनि पर्छ । राजा सूर्य भएकाले ताप बढ्ने एवम् कम पानी पर्ने पात्रोमा उल्लेख छ ।
विशाखा नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्रमा पूर्णिमा परेको महिनालाई जेठ, पूर्वाषाढामा पूर्णिमा भएको महिनालाई असार, श्रवण नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई साउन, पूर्वभाद्रपदा नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई भदौ, अश्विनी नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई असोज, कृतिका नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई कात्तिक, मृगशिरा नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई मङ्सिर, तिष्य नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई पुस नामकरण गरिएको समिति अध्यक्ष गौतमले बताए ।
यसैगरी, मघा नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई माघ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई फागुन र चित्रा नक्षत्रमा पूर्णिमा भएको महिनालाई चैत नामकरण गरिएको हो ।
नयाँ वर्षका अवसरमा काठमाडौँको उत्तरी भेगस्थित बूढानीलकण्ठ र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सीमामा रहेको वाग्द्वार वागमती नदीको उद्गमस्थलमा विशेष स्नान मेला लाग्छ । यसैगरी, टोखा चण्डेश्वरीको सपनतीर्थ र कीर्तिपुरस्थित चम्पादेवीमा पनि मेला लाग्ने गरेको छ ।
काठमाडौँको उत्तर–पश्चिमी भेगस्थित टोखाको खहरे अर्थात् सपनतीर्थमा शनिवार स्नान गरेमा कुष्ठरोग एवम् लुलो लङ्गडोपना हटी पुनः शारीरिक तन्दुरुस्तता प्राप्त हुने जनविश्वास छ ।
नयाँ वर्षकै अवसरमा भक्तपुरमा एक साता लामो बिस्केट जात्रा मनाइन्छ । यो जात्रा वैशाख १ गते उत्कर्षमा पुग्छ । बिस्केट जात्रा देशका अन्य भागमा पनि मनाउने चलन छ । उपत्यकामा साँखु र टोखामा समेत बिस्केट जात्रा मनाइन्छ । यसबाहेकका जिल्लामा चैत मसान्तका दिन लिङ्गो ठड्याई वैशाख १ गते ढलाइन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नव वर्ष सुरु हुने दिन अर्थात् वैशाख १ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा भीड लाग्न थालेपछि दर्शन एवम् पूजाआजा गर्नेका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
२०७५ बैशाख १ ०६:२२